Banyere Anyị - Shijiazhuang Mets Machinery Co., Ltd.
Shijiazhuang Mets Machinery Co., Ltd.(nke a na-akpọ Mets Machinery) bụ ụlọ ọrụ mba ụwa ọkachamara na ịmepụta na ọrụ nke nfuli slurry. Isi ụlọ ọrụ dị na mpaghara mmepe ọgbara ọhụrụ, Shijiazhuang City, Hebei Prov.,. Mets Machinery jikwaa Hebei Hanchang mineral Co., Ltd. na ọtụtụ ndị enyemaka mba ụwa.
E hiwere Mets Machinery na 2008, ụlọ ọrụ ahụ na-elebara ogo ngwaahịa, nyocha na mmepe anya dị ka ndụ ya. 30% bụ ndị mmepe teknụzụ n'etiti ihe ruru ndị ọrụ China na ndị mba ọzọ na ụlọ ọrụ 100. Mets Machinery etinyewo ihe karịrị yuan 120 nde na teknụzụ, nyocha nyocha na mmezi usoro mmezi n'ime afọ 10 gara aga, nke na-eme ka ogo ngwaahịa nke ngwaahịa anyị.
Ozi ọrụ anyị bụ ịghọ akụkụ ahụ ọkachamara nke ndị ahịa anyị. Anyị na-agbaso ụkpụrụ ndị ahịa. Anyị na-ewu ụlọ nkwakọba ihe na ebe a na-arụ ọrụ na ebe ndị a na-egwupụta akụ na ụwa, na-eburu ahịa ahịa na ọkwa miri emi.
Ọzọkwa Mets ígwè ọrụ ike na-arụ ihe ndị kasị zuru ezu akụkụ ahụ mapụtara ụlọ nkwakọba ihe na ndị kasị ọkachamara mgbe-sales ọrụ otu egwuregwu. Ugbu a, ụlọ nkwakọba ihe na ebe obibi na Perth, Australia na Laos na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia etinyela n'ọrụ. A na-ahazi ma emesịa ahịa ọrụ na Middle East, Commonwealth nke ndị nweere onwe ha, South America na etiti Africa na-eme atụmatụ ma wuo ya site na nkwụsị.
Anyị na-esi ọnwụ na-enye pụrụ ịdabere na elu àgwà ngwa maka ndị ahịa na nke kasị nso oge.
Ebumnuche Metslurry bụ "B BE AKW YOURKWỌ AKWAREKWỌ AREBỌR AND NA WORLỌ".
Mets ewepụtara na-enye elu àgwà Ngwuputa akụrụngwa ọnwụ sọ na OEM ọrụ na Ngwuputa ubi. Anyị na-esi ọnwụ na-eweta ọgwụgwụ ọrụ pụrụ ịdabere na àgwà na ngwaahịa na kasị nso ụzọ oge.
Companylọ ọrụ anyị na-agbaso echiche nchịkwa "ndị mmadụ na-adabere na ya, anyị na-ahazi mgbe nile ụdị dị iche iche nke ihe omume ntụrụndụ, na-eme ka ahụike nke ndị ọrụ dịkwuo mma, na-eme ka ndụ ndị ọrụ baa ọgaranya, na-eme ike ọ bụla iji mee ka ndị ọrụ nọ n'ụlọ ọrụ ahụ nwee mmetụta nke" ụlọ .
Companylọ ọrụ anyị na-agbaso "nkà ihe ọmụma ọhụrụ, nke ọma, nke ọma, ọkachamara" azụmaahịa, yana '' ngwaahịa dị elu '', 'ọnụahịa asọmpi' 'na' 'n'oge nnyefe' 'iji zute mkpa ọkachamara dị iche iche nke ndị ahịa dị iche iche.
Ndị enyemaka zuru ụwa ọnụ
Ná mmalite nke ya oruru, mmepe atụmatụ nke onwe ha nnyocha na mmepe na-eke a mba ika e formulated.
Nraranye na nnọgidesi ike na-enye anyị ohere ikpokọta teknụzụ na ahụmịhe na ịtọ ntọala maka mmepe.
Mgbasa nke mmepụta ihe bụ naanị n'ihi na anyị na-agbaso ụkpụrụ ogo dị elu mgbe niile.
Ebuli akụrụngwa, teknụzụ na usoro njikwa iji mee ka mgbasawanye.
Mụbawanye ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ịgbakwunye akụrụngwa akara ọnụọgụ, ma melite ogo na ogo.
Ọganiihu na-aga n'ihu na ngwa ọhụụ, na -emepụta uru maka ndị ahịa, ma na-aga n'ihu n'ọdịnihu.